Ezinye iiodolo zeAirTag ziqhubela phambili | Ndisuka mac
Ezinye ii-odolo zeAirTag ziyaqhubekeka
Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo siphawule eli nqaku linye IiAirTag zeApple zifumana ulibaziseko kumaxesha okuhambisa kubathengi bazo. Ngeli xesha siza kuthetha ngokuchaseneyo, abasebenzisi abangashiyanga ukuthengwa ngomhla wokumiliselwa kwayo okanye kwezi ntsuku zilandelayo baya kufumana izaziso ezivela kwiinkampani zothutho ngaphambi kokufika kweodolo yakho.
Sikwazile ukungqinisisa oku kwingxoxo yethu Yocingo #podcastApple apho abasebenzisi abaliqela bafumene izaziso ezivela kwinkampani yezothutho nge ukufika kwemveliso yakho kusuku olulandelayo 28, ngolwesithathu olandelayo.
Uninzi lwaba basebenzisi babe neodolo ebekelwe uLwesihlanu olandelayo, ngo-Epreli 30. Kule meko, kubonakala ngathi inokufika kwangoko kunokuba bekulindelwe yinkampani yeCupertino uqobo. Ngokusengqiqweni oku akwenzeki kubo bonke abasebenzisi abathengile ii-AirTags kodwa bathenga ezimbalwa kwaye akucetyiswa ukuba ukuthunyelwa okulandelayo kunokufumana inkqubela phambili ebalulekileyo ngexesha lokuhanjiswa, siza kubona.
Njengoko besesiphawulile ngaphambili, uguquko lweCeltic lubonakala ngathi lufikelele kubasebenzisi beApple ngombane omkhulu abasebenzisi bajika bathenga yale mveliso isungulwe yinkampani nge-20 ka-Epreli. Ngokunokwenzeka uninzi lwaba basebenzisi benza ukuthengwa kube ngonaphakade kwaye kuba ixabiso laso lifana nqwa nezinye izixhobo ezibonelela ngokusebenza ngokufanayo ne-AirTags kodwa ngokwahluka okubonakalayo okwenza incam yokulinganisa iye kwimveliso yenkampani yeCupertino.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ezinye ii-odolo zeAirTag ziyaqhubekeka
Ndingomnye wabo bafumana iSMS kwi-DHL, kodwa namhlanje ndifumene enye iSMS enombhalo:
«Mthengi weApple othandekayo, masixolise ngokungalunganga kokufumana ngempazamo isicatshulwa esivela kwi-DHL malunga ne-oda yakho ye-APPLE. Nceda ungayihoyi kwaye uqinisekise iodolo yakho yoqobo ye-APPLE. Enkosi "
kubonakala ngathi yayikukungaphumeleli kwe-DHL ...
IMacOS Big Sur 11.3 kunye ne-tvOS 14.5 ikhutshelwe bonke abasebenzisi